Inqubomgomo Yemfihlo | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
Siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi ye-C3 Manufacturing LLC ("Descent Perfect") ("Site") etholakala ku-URL www.perfectdescent.com. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza izinqubomgomo ezithile ezenziwa yi-C3 Manufacturing LLC "Descent Perfect" elawula ukusetshenziswa kwe-Perfect Descents kolwazi olukhomba umuntu mayelana nabasebenzisi beSayithi lethu
Ukubuyekezwa kwenqubomgomo yobumfihlo
Ukudalulwa Kwemininingwane Yokukhomba Umuntu
Isaziso Abasebenzisi baseYurophu
Ngenxa yemvelo eguquguqukayo ye-Intanethi, i-Perfect Descent ingadinga ukubuyekeza le Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Uma kunjalo, i-Perfect Descent izothumela Inqubomgomo Yobumfihlo ebuyekeziwe kuSayithi lethu kanye nesaziso soshintsho esiku-perverdescent.com. Ukwehla Okuphelele nakho kungathumela abasebenzisi ababhalisiwe bezinsizakalo zethu isaziso sokuthi le Nqubomgomo Yobumfihlo isishintshiwe. I-Perfect Descent ikukhuthaza ukuthi ubuyekeze le Nqubomgomo Yobumfihlo njalo nganoma yiziphi izinguquko. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwaleli sayithi kanye / noma ukuqhubeka nokuhlinzekwa kwemininingwane yakho engakhonjwa kithi ngemuva kokuthunyelwa kwalesi saziso kuzoba ngaphansi kwemigomo yeNqubomgomo Yemfihlo ngaleso sikhathi.
Ngokuvamile ungavakashela iSayithi lethu ngaphandle kokuveza noma yiluphi ulwazi olukhomba wena. Kodwa-ke, ezingxenyeni ezithile zalesi Sayithi futhi lapho usebenzisa izinsizakalo zethu, singakumema ukuthi uxhumane nathi ngemibuzo noma imibono noma ucele imininingwane, usinikeze impendulo, noma ugcwalise iphrofayili noma ifomu lokubhalisa. Ngenxa yohlobo lweminye yale misebenzi, singaqoqa imininingwane ekhomba umuntu uqobo njengegama lakho, ikheli, i-zip code, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, imboni noma imininingwane yomsebenzi kanye neminye imininingwane yokuxhumana oyithumela ngokuzithandela ne ukuxhumana nathi.
Singasebenzisa imininingwane yakho ekuhlonzayo ukuze sikubhalisele ukusebenzisa izinsizakalo zethu, ukuletha izinsizakalo zethu noma imininingwane oyicelile, uqinisekise igunya lakho ukungena eSizeni sethu futhi usebenzise izinsizakalo zethu, uthuthukise okuqukethwe kanye nokuphathwa okujwayelekile kweSayithi nezinsizakalo zethu, ukuhlinzeka wena ngezaziso eziphathelene nempahla noma izinsizakalo ozithengile noma ongafisa ukuzithenga ngokuzayo, kanye nokukhangisa okuqondisiwe. Uzokwazi ukuphuma ekutholeni noma yikuphi ukuxhumana okuvela kithi okungabalulekile ekusebenzeni kwezinsizakalo ze-Perfect Descent ozisebenzisayo.
I-Perfect Descent iyazibona izintshisekelo zobumfihlo zezingane futhi sikhuthaza abazali nabanakekeli ukuthi babambe iqhaza elibonakalayo emisebenzini nasezintshiswaneni zezingane zabo online. Indawo yethu noma izinsizakalo zethu azenzelwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-13. Ukwehla Okuphelele akubhekisi izinsizakalo zalo noma leli Sayithi ezinganeni ezineminyaka engaphansi kwengu-13. Ukwehla Okuphelele akuqoqeli ulwazi oluhlonza umuntu uqobo ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13.
Singasebenzisa amafayili wombhalo amancane abizwa ngamakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lweSayithi jikelele. Ikhukhi ucezu lwedatha olugcinwe kwi-hard drive yomsebenzisi equkethe imininingwane ngomsebenzisi. Ngokuvamile amakhukhi awavumeli ukuthi sikukhombe mathupha.
Sisebenzisa idatha yezithameli zenkampani yangaphandle ye-Google Analytics efana nobudala, ubulili, nezintshisekelo ukuqonda kangcono ukusebenza kwamakhasimende ethu futhi sisebenza nezinkampani eziqoqa ulwazi mayelana nemisebenzi yakho eku-inthanethi ukunikela ngokukhangisa okuqondiswe ekuvumelaneni nezintshisekelo zakho nezinto ozithandayo. Ungabona izikhangiso ezithile kwamanye amawebhusayithi ngoba sisebenzisana ne-Google nezinye izinkampani ezifanayo ukukhomba izikhangiso zethu ngokususelwa kulwazi esiluqoqile noma esiluqoqile, kufaka phakathi imininingwane eqoqwe ngezindlela ezizenzakalelayo (ezifana namakhukhi namabhikhoni ewebhu). Lezi zinkampani zisebenzisa ubuchwepheshe obuzenzakalelayo ukuqoqa imininingwane uma uchofoza kuzikhangiso zethu, ezisiza ukulandelela nokuphatha ukusebenza kwemizamo yethu yokumaketha.
Ungahlela noma ukhethe ukuphuma ekuqoqeni okuzenzakalelayo kwemininingwane ngamanethiwekhi wesikhangiso avela eceleni ngenjongo yokuletha izikhangiso ezenzelwe izintshisekelo zakho, ngokuvakashela izintandokazi zezikhangiso ze-Google Display Network ku http://www.google.com/ads/preferences
Isiza singalandelela inani eliphelele labavakashi beSayithi lethu, inani lezivakashi ekhasini ngalinye leSayithi lethu, uhlobo lwesiphequluli, amakheli e-IP, amaSayithi weWebhu angaphandle (achazwe ngezansi) axhumene nenye idatha ehlanganisiwe eqoqwe ngezinsizakalo zethu futhi hlaziya le datha ngamathrendi nezibalo kokuhlanganisiwe, kepha leyo mininingwane izogcinwa, isetshenziswe futhi ivezwe ngendlela ehlanganisiwe kuphela futhi ngeke iqukathe imininingwane eveza umuntu uqobo. Singasebenzisa lolu lwazi oluhlanganisiwe ukuhlaziya izitayela, ukuphatha iSayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi, nokuqoqa imininingwane ebanzi yabantu yokusetshenziswa kokuhlanganiswa.
Singakunikeza ngemininingwane yakho ekhomba wena uqobo kanye nedatha eyenziwe amakhukhi kanye nemininingwane ehlanganisiwe kubathengisi kanye nama-ejensi esevisi esingahlanganyela nawo ukusisiza ekuhlinzekeni ngezinsizakalo zethu kuwe. Isibonelo, singanikeza imininingwane yakho ekhomba wena uqobo enkampanini ephatha i-imeyili ukukunikeza izaziso mayelana nezinsizakalo zethu. Uma uthenga ngeSayithi, umhambisi wethu womhlaba wonke uzokwazi ukufinyelela kunoma yiluphi ulwazi olukhomba wena olufaka noma uluthumele ukuqedela ukuthengiselana. Sizodalula imininingwane yakho ekhomba wena uma sikholwa ngokufanele ukuthi sidinga ukwenza njalo ngomthetho, umthetho noma esinye isiphathimandla sikahulumeni noma ukusiza kunoma yiluphi uphenyo, ukuvikela amalungelo ethu noma abasebenzisi bethu noma ukuphoqelela imigomo yethu yokusebenzisa. Ngeke sithengise imininingwane yakho ekhomba wena kunoma iyiphi inkampani noma inhlangano ngaphandle kokuthi singadlulisela imininingwane yakho ekhomba wena siqu ebhizinisini elizolandela lapho kuhlanganiswa, ukuhlanganiswa noma okunye ukuhlelwa kabusha kwebhizinisi lapho i-Perfect Descent ibamba iqhaza khona noma kumthengi wayo yonke into noma i-Perfect ngokuphelele Impahla yokwehla okuhlobene nayo le Sayithi.
Isiza singanikeza izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi noma izinsiza lapho i-Perfect Descent ingenakho ukulawula khona ("amawebhusayithi wangaphandle"). Izixhumanisi ezinjalo azenzi ukuqinisekiswa yi-Perfect Descent yalezo zingosi zewebhu zangaphandle. Uyavuma ukuthi Ukwehla Okuphelele kunikeza lezi zixhumanisi kalula nje, futhi uyavuma futhi ukuthi i-Perfect Descent ayinasibopho ngokuqukethwe kwalawo Masayithi Wewebhu wangaphandle. Ukusetshenziswa kwakho kwamaSayithi weWebhu wangaphandle kungaphansi kwemigomo yokusetshenziswa nezinqubomgomo zobumfihlo ezisendaweni exhunywe kumawebhusayithi wangaphandle.
Singasebenzisa izindlela zenqubo nezobuchwepheshe ezidizayinwe ngokufanelekile ukusiza ukuvikela imininingwane yakho ekhomba wena ekulahlekelweni, ukufinyelela okungagunyaziwe, ukudalulwa, ukuguqulwa noma ukubhujiswa. Ukwehla Okuphelele kungasebenzisa izingodo zomlilo, ukuvikela iphasiwedi, isokhethi eliphephile, nezinye izindlela zokuphepha ukusiza ukuvimbela ukufinyelela okungagunyaziwe kolwazi lwakho olukhomba wena. Uma kudingeka iphasiwedi, sikukhuthaza ukuthi ukhethe iphasiwedi eqinile (ngokuvamile ende, iqukethe izinhlamvu ezinkulu nezinhlamvu ezincane kanye nezinombolo nezimpawu, futhi akuqukethe amagama esichazamazwi noma imininingwane yakho yomlando).
Uma ungumsebenzisi obhalisiwe wezinsizakalo zethu, ungalungisa, uchibiyele noma ususe imininingwane yakho ekhomba wena uqobo egcinwe yi-Perfect Descent, ngaphandle kwalapho umthwalo noma izindleko ku-Perfect Descent zokunikeza ukufinyelela zingahambelani nobungozi obuyimfihlo yakho noma lapho amalungelo asemthethweni abantu ngaphandle kwakho azophulwa. Sicela ungene ku-akhawunti yakho ukulungisa, ukuchibiyela noma ukususa imininingwane yakho ekhomba wena uqobo. Ngokwengeziwe, uma ufisa ukuthi yonke imininingwane yakho yangasese isuswe ezinhlelweni ze-Perfect Descent, ungahambisa isicelo sokuthi i-akhawunti yakho isuswe. Lapho sekususiwe, yonke imininingwane yakho izokhishwa unomphela kusuka kumaseva wethu wokukhiqiza oyinhloko futhi ukufinyelela okuthe xaxa ku-akhawunti yakho ngeke kwenzeke. Noma kunjalo, izingxenye zolwazi lwakho, ezibandakanya imininingwane ehlanganisiwe etholakala emininingwaneni yakho, ingahlala kumaseva ethu unomphela.
Leli Sayithi kanye nezinsizakalo zethu ziqondiswe kubasebenzisi base-United States of America. Noma imiphi imininingwane oyifaka kuleli Siza noma oyinikeze iDescent Descent ingadluliselwa ngaphandle kwe-European Union iye e-United States of America enganikeli ngezinga elilinganayo lokuvikelwa kulokho okudingekayo e-European Union. Ikakhulu, uyelulekwa ukuthi i-United States of America isebenzisa imodeli yemikhakha yokuvikela ubumfihlo ethembele enhlanganisweni yomthetho, kuhulumeni, nasekuzilawuleni. I-Article 26 ye-European Union's Data Protection Directive (Directive 95/46 / EC, 1995 OJ (L 281) 31) ivumela ukudluliswa kwemininingwane yomuntu kusuka e-European Union iye ezweni lesithathu uma lowo muntu evume ngokungagunci imvume yakhe ekudlulisweni kolwazi lomuntu siqu, kungakhathalekile ukuthi izwe lesithathu livikela kangakanani Ngokuvuma Imigomo Yokusebenzisa kanye nale Nqubomgomo Yobumfihlo, uyavuma ukudluliselwa kwalo lonke lolo lwazi e-United States of America okungenzeka ukuthi alunikeli ngezinga elilinganayo lokuvikelwa kulokho okudingekayo e-European Union nasekucutshungulweni kwalolo lwazi nge-Perfect Descent kumaseva ayo atholakala e-United States of America njengoba kuchaziwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Uma unemibuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo sicela uxhumane nathi nge-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] noma ngeposi ku:
Ubumfihlo Nokuvikeleka Kwemininingwane
IC3 Ukukhiqiza LLC
Iyunithi engu-3809 yeNorwood Drive 1
ILittleton, CO 80125
Le Nqubomgomo Yobumfihlo iyasebenza kusukela ngomhla ka: May 9, 2018